Health – Page2– Shwe Ba
Shwe MM | June 24, 2020
တစ်ခုခုကြော်ပြီးတဲ့ဆီကို ပြန်ပြီး အပူပေးလိုက်တဲ့အခါ အဲဒီဆီကအဆိပ်အဖြစ် ပြောင်းလဲသွား ပါတယ်။ကျွန်မတို့ အိမ်ရှင်မတွေဟာ မဟုတ်တာလေးကို သိပ်ကန့်တွက်ကြပါတယ်။ ကြက်ဥကြော် လိုက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ပိုနေတဲ့ ဆီတွေကို အရွက်တစ်ခုခုကြော်ဖို့အတွက် ပြန်ပြီးအသုံးပြု တတ်ကြပါတယ်။ကိုယ်သုံးနေတဲ့ဆီဟာ ဟင်းသီးဟင်းရွက်က ထုတ်တဲ့ ဆီဖြစ်နေရင် ပိုလို့ တောင်ရှောင်ကျဉ်ပေးသင့်ပါတယ်။ အိမ်ရှင်မတို့ရဲ့ လက်ထဲမှာ မိသားစုတစ်ခုလုံးရဲ့ ကျန်းမာရေး ပုံအပ်ခံထားရတယ်ဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့နော်။ တစ်ခုခုကြော်ပြီးလို့
အိပ်ရေး ပျက်ပြီး အားအင်ကုန် ခမ်း မောပန်းနေ သူတွေ ချက်ခြင်း လန်း ဆန်းစေတဲ့ ဆေးတခွက်
Shwe MM | June 16, 2020
အားအင်ကုန်ခမ်းမော ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းနှင့်် မူးဝေခြင်းကို သက်သာ ‌ပျောက်ကင်းစေသည့် ကြက်ဥသံပုရာဆမ်း ‌ဆေးတစ်ခွက်”၊ အလုပ် ပင်ပန်းလို့ဖြစ်ဖြစ်၊ အားအင် ကုန်ခမ်းလိုိ့ပဲဖြစ်ဖြစ် ၊မူးဝေနေရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် အလွယ်တကူ သက်သာ ‌ပျောက်ကင်းစေတဲ့‌။ ဆေးနည်း တစ်လက်ကို မျှဝေပေးပါ့မယ်။ ပါဝင် ပစ္စည်းတွေကတော့-(၁) ကြက်ဥ အစိမ်းတစ်လုံး (မည်သည့်ကြက်ဥမဆို) (၂) သံပုရာသီး အမှည့်တစ်လုံး ၊(၃) သကြားဖြူ
တရုတ် စကားပွင့်ရည် ကို လက်ဖက်ခြောက်ရည် လို သောက်မယ် ဆိုရင် ရနိုင်မဲ့ မယုံနိုင်ဖွယ်ရာ အကျိုးကျေးဇူး
Shwe MM | June 15, 2020
စ ကားပွင့် ပန်းကို သုပ်စား ကြော်စားကြတာများပါတယ် အပွင့်ခြောက်ကို နေပူလှန်းပြီး သောက်ကြည့်ပါနော်…ဘာတွေကောင်းလဲ ပြောပြမယ် ကျမတော့ နေ့တိုင်းသောက်နေပြီမို့ မသိတဲ့သူတွေ ကို မျှဝေချင်ပါတယ် တ ရုတ်စကားပွင့်ရည်ကို လက်ဖက်ခြောက်ရည်လို သောက်မယ်ဆိုရင် ရနိုင်မဲ့အကျိုးလေးတွေကို ကြည့်လိုက်ကြရအောင်နော်မွေးရနံနဲ့တင် လူကို ဆွဲဆောင်နေပါပြီ အနံ့က လန်းဆန်းလို့ အိပ်မပျော်တဲ့သူတွေအတွက် အရမ်းကောင်းပါတယ်တရုတ်စကားပွင့်ရည်က လည်ချောင်းတွေ ခြောက်သွေ့ပြီး
L K T | March 12, 2020
မြန်မာတွေက အပ်မှို ဆိုပြီးခေါ်တဲ့ Sun Hong Foods, Inc. တံဆိပ်ပါ Enoki မှိုမှာ Listeria ပိုးတမျိုး ရှိနေတဲ့ အတွက် မစားကြဖို့ အမေရိကန် CDC က ပြောလိုက်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် – ကိုယ်ဝန်ဆောင်၊ အသက် ၆၅ နှစ်နဲ့အထက် ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်ခံအားစနစ် အားနည်းသူတွေ
L K T | March 10, 2020
ပြည်သူလူထု အတွင်းအလွယ်တကူနှင့် ဖျောက်ဖျက်၍မရနိုင်သေးသော ဆေးပညာ နှင့် ပတ်သတ်သည့် အယူအဆအမှားများ အင်္ဂလိပ်ဆေး နှင့် သံပုရာရည် ၊သို့ မဟုတ် အချဉ် လုံးဝမတည့်ဟူသော အယူအဆအမှားမှာ လူ ၁၀၀ တွင် လူ ၉၀ ကျော်၏စိတ်၌စွဲမြဲစွယုံကြည်လျက်ရှိသည်။ အချဉ် စားမိလို့ဆေးမသောက်ဖြစ်ဘူး အချဥ်စားထားမိလို့ ဆေးမထိုးပေးပါနဲ့ဆရာ
L K T | March 2, 2020
အသက် ( ၄၀ ) ကျော် လာတာ နဲ့ ယောင်္ကျား ဖြစ်ဖြစ် မိန်းမ ဖြစ်ဖြစ် ရိုးတွင်း ချဉ်ဆီ ခမ်းလာ တတ် ပါ တယ် ။ အိမ်ထောင် သည် တွေ ပိုဆိုး ပါ တယ် ….။ ရိုးတွင်း ချဉ်ဆီ ခမ်းလာရင်
လူပျိုနာ၊ အဆုပ်နာ၊ သွေးဝမ်း၊ စိတ်ပင်ပန်း၊ လူပင်ပန်း နှင့် အင်အားကုန်ခမ်းခြင်းတို့ အတွက် တန်ဖိုးကြီး တဲ့ ငရံ့ပတူ
L K T | February 17, 2020
စိတ်ပင်ပန်း၊လူပင်ပန်း အင်အားကုန်ခမ်း သူတို့အတွက် အလွန် အားထားရသော အပင်ဖြစ်သည်။အရွက်ကိုပြုတ်ပြီး ကြက်သွန်ဖြူ၊ကြက်သွန်နီ၊ပုဇွန်ခြောက်ဖြင့် အားပါးတရ သုပ်စားပေးပြီး၊ငရံ့ပတူ အမြစ် ကို နှမ်းဆီ လေးဖြင့် သွေးပြီး ခန္ဒာကိုယ်အနှံ့လိမ်းကျံပေးပါက သိသိသာသာလန်းဆန်း စေကာ အင်အားသစ် တို့ရရှိစေပါသည်။ ခါးသက်သော အရသာ ရှိပါသည်။ အဆုပ်နာ နှင့် ငရံ့ပတူ အဆုပ်နာ သူတို့ ငရံပတူ
မိတ်ဆွေ သင်..ထိုင်ရာကနေ ထလိုက်တဲ့အခါ မိုက်ခနဲမူးဝေသွားတာမျိုးဖြစ်ဖူးရင်
L K T | February 15, 2020
ထိုင် ရာ ကနေ ရုတ်တရက် ထရပ်လိုက်တဲ့ အခါ မိုက်ခနဲ မူးသွားတာမျိုး ဖြစ်ဖူးကြမှာပါ။ တခါတလေဆို မျက်စိတွေပြာဝေသွားပြီး ခန္ဓာကိုယ်က ယိုင်ထိုးသွားတာမျိုး အထိဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒီလို ဘာလို့ဖြစ်တာလဲ၊ ဒီလိုဖြစ်တာဟာ ကိုယ့်အတွက် အန္တရာယ်ရှိလားဆိုတာ သိထားဖို့ ဒီစာလေးကို ဆုံးအောင်ဖတ်ကြည့်ပါ။ မိုက်ခနဲ မူးဝေခြင်းဟာ …. ခန္ဓာကိုယ်မှာ ရေဓာတ်နည်းနေခြင်းကြောင့် ဖြစ်နိုင်တယ်။
Shwe Moe | November 29, 2019
1. If you want to lower the blood pressure, soakalemon for 15 minutes, squeeze in the juice and add one egg to the mixture. It works